လွတ်တော်မှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ကေအဲန်ယူကို ပြောကြား
မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကို ဇန်နဝါရီလ ၅ရက် မနေ့ညနေ က တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ ကာလရှည် ကြာပြီဖြစ်သည့် မိမိတုိ့အချင်းချင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေကို မိမိတို့လက်ထက်မှာ အဆုံးသတ်ပြီး သမိုင်းတွင်ရစ်မည့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် KNU ခေါင်းဆောင်များ ဒုတိယအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးစဉ်
Photo : President Office Website
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူးစေးဖိုးက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကနေ စတင်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် မိမိတို့ KNU အဖွဲ့က ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုများ ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဟန့်အတား ဖြစ်နေကြောင်း၊ ကချင်ဒေသငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မိမိတို့ကူညီလိုကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားပါတယ်။
အဲဒီနောက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က သူ့အနေနဲ့ မြန်မာတပ်မတော်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ရုံမှအပ စတင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ရန် မှာကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ မတူကွဲပြားမှုများကို ဖယ်ရှားပြီး တူသည်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအဆင့် ဆွေးနွေးဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး ပါဝင်တဲ့ လွှတ်တော်ဟာ ဆွေးနွေးရန် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သမ္မတရုံး အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
နေပြည်တော်က အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ့်ကိစ္စတွေကို တင်ပြခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူ မြန်မာအစိုးရဖက်က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်များ တက်ရောက်ကြပြီး ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ဖက်က ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုးနှင့်အတူ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ အတွင်းရေးမှူး(၂) ဖဒိုစောမန်းမန်း၊ ဗဟိုကော်မတီဝင်များ ဖြစ်ကြတဲ့ ဖဒိုစောရော်ဂျာခင်၊ ဖဒိုမန်းညိမ်းမောင်နှင့် ဖဒိုစောလှထွန်း တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
The burmese and the karen(kayin)shall not live in the same country.If burmese want to live in peace, burmese should let them live seperately.
Jan 08, 2013 01:13 AM
ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်ရင် ဒီအခေတ်မှာ အမြင်ကျဉ်းနေလို့ မရတော့ဘူး ကိုရဝမ်လေးရေ နှစ်ဘက် ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စမှာ နှစ်ဘက်စလုံးက မျှတစွာ လျော့ပေးရမှာပဲ့ ကိုယ်က ကြီးပဲ့ အပိုလိုနေရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး စွန့်စားသင့််တဲ့ နေရာမှာ ချောင်ကပ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကပဲ့ ဆုံးရှုံး နစ်နာမှာပဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်တဲ့သူတိုင်း အမြင်ကျယ်ကြပါစေ..။
Jan 07, 2013 12:23 AM
သူ တို့ ထောင်ချောက်ထဲ တု်င်းရင်းသားတွှေရောက်တော့မယ်။သတိထားပါ။
Jan 06, 2013 09:57 PM
KNU will be eaten big time by Burmese if the group keep going on the so called ceasefire status with the Thein Sein administration. KNU better learn from the ceasefire experiences of KIO/KIA. Why KIO/KIA is fighting back Burma Army. Talking politic in parliament is useless, KNU won't gain anything.
Don't believe talking of anybody.The best way is only split country.If the all ethnics unite and fight bravely ,we can get freedom from Burma certainly.UN is for fair group.
Jan 06, 2013 03:56 PM